Rohila Testosteron Cypionate mpamokatra sy mpamatsy - Factory
Ampy fitaovana amin'ny testosterone Cypionate dia ampiasaina amin'ny fitondran-tena amin'ny fihanaky ny homogonadisma amin'ny lahy. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny lahy dia tsy mamokatra ampy amin'ny testosteron sex hormone. Ny testosterone cypionate dia tonga amin'ny endriky ny vahaolana entina hampidirana ao amin'ny hozanao.
Rano Testosterone vovoka poizina (58-20-8)
Rojo Testosterone Pulverine poison (58-20-8) Description
Ny voan-kafe testosterone Cypionate, dia androgen sy anabolic steroid (AAS) fanafody izay ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana ny halatra testosterone ambany amin'ny lehilahy. Ampiasaina amin'ny fitsaboana hormonina ho an'ireo lehilahy mpandika lalàna koa izy io.
Ankoatra ny fampiasana ara-pahasalamana, ny poezia Testosterone Cypionate dia ampiasaina hanatsarana ny vatana sy ny fahombiazana. Ny zava-mahadomelina dia fitaovana enti-matavy any amin'ny firenena maro ary noho izany dia tsy ara-dalàna ny fampiasana tsy ara-pahasalamana.
Ny tsimokaretina Roa Testosterone dia ampiasaina voalohany amin'ny fitsaboana solon'ny androgen. Ankehitriny, ny FDA dia nankatoavina ho fitsaboana trangam-panafody voalohany na hypogonadotropic (na fiterahana na tratra). Ny fiarovana amin'ny andropause (ny fihanaky ny homamiadana efa hatry ny ela) dia mbola tsy niorina. Ampiasaina amin'ny fakana an-keriny ny marary an-kibon-dreny, ny aretin'ny taovam-pananahana, ny fahaleovan-tena ho an'ny tovolahy, ny oligospermia (siramamy ambany), ny fitsaboana fanoloana hormone amin'ny lehilahy mpivaro-tena, ary ny osteoporose.
Product Name Toeram-pitsaboana roahin'ny testosterone
Anarana simika 58-20-8; Depovirin; Pertestis; Testosterone cyclopentylpropionate; Testosterone cyclopentanepropionate
molekiolan'ny Formula C27H40O3
molekiolan'ny Wvalo 412.6
mitsonika Point 98 - 104 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Ny famonoana ny antsasaky ny fiainana dia andro 8
Inona no atao hoe vovobonin'ny siramamy testosterone (58-20-8)?
Ny testosterone cypionate dia avy amin'ny sentetika testosterone amin'ny endriky ny solika 17 (beta) -cyclopentylpropionate ester. Ny tombony raha oharina amin'ny dodea testosterone hafa dia ny fihenan'ny famotsorana aorian'ny fampidirana sy ny antsasaky ny fiainana an-davaka. Ny toetra mampiavaka ny testosteron cypionate poids sy ny testosterone enanthate dia tena mitovy, koa samy izy roa izy ireo dia toa miovaova.
Ahoana ny fomba famokarana rongony testosterone (58-20-8) asa
Ny vatana testosterone cypionate dia avy amin'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe androgens. Ny karazana fanafody dia vondrona fanafody izay miasa amin'ny fomba mitovy. Matetika ireny fanafody ireny no ampiasaina hanehoana toe-javatra toy izany.
Ny vatana testosterone cypionate dia miasa mba hanasitranana ny lahy sy ny vavy amin'ny lehilahy amin'ny fanoloana ny testosterone ny vatanao tsy afaka manao.
Rongony testosteron Cypionate vovoka (58-20-8) Dosage
Mety tsy azo ampidinina daholo ny dosages rehetra sy ny rongony. Ny dosage, ny fanafody, ary ny fotoana isaoranao azy dia miankina amin'ny:
Manao ahoana ny fahasarotanao?
Fitsaboana hafa anananao
ahoana ny fihetsikao amin'ny doka voalohany
hery:100 mg / mL, 200 mg / mL
Adult dosage (taona 18 taona sy mihoatra)
Fanaovana dingana mahazatra:Ny dosage dia miankina amin'ny taonanao sy ny aretinao. Ny dokotera dia hanapa-kevitra ny dosage miorina amin'ny zavatra ilainao. Amin'ny ankapobeny, ny dosage dia ny 50-400 mg izay nampidirina ao amin'ny sainanao mandritra ny herinandro 2-4.
Mihamitombo ny doka:Ny dokoteranao dia afaka manitsy ny dosage mifototra amin'ny taharo fototry ny testosterone, ny valin'ny fitsaboana, ary ny fiantraikany.
Maksimum dosage:Ny 400 mg dia nampidirina isan-tsegondra ao anatin'ny segondra 2 anao.
Dosage ho an'ny hypogonadotropic hypogonadism
Rojo Testosterone Pulverine poison (58-20-8) Benifits
1). Fo sy salama mahasalama
Ny fo salama dia mandrehitra ny ra ho an'ny sisa amin'ny vatana, manome hozatra sy taova miaraka amin'ny oksizenina ilaina ho an'ny fahombiazan'ny peak. Ny Testosterone dia manampy ny famokarana sela mena amin'ny alalan'ny tsokan-taolana. Ny haavon'ny testosterone ambany dia mifandray amin'ny fahasamihafàn'ny karazam-borona.
2). Tsy dia matavy loatra, be loatra ny hozatra
Ny testosterone dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny volombava. Ny vatana mangatsiaka dia manampy amin'ny fanaraha-maso ary mampitombo ny heriny.
3). Ny taolana mahery
Ny testosterone dia mitana toerana lehibe eo amin'ny taratra mineraly. Ny lanjan'ny taolana dia mihena rehefa mihantitra ny taonan'ny olona sy ny testosterone. Izany dia mampitombo ny mety ho voka-tsoa amin'ny taolana sy ny osteoporose. Ny taolana mafy dia manampy ny hozatrao sy ny taova anatiny, izay afaka manatsara ny asan'ny atleta.
4). Fahatsiarovana tsaratsara kokoa, fahaiza-manao amin'ny habakabaka, na fisainana matematika
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny olona voan'ny testosteron dia voan'ny aretin'ny Alzheimer.
Ny tahan'ny testosterone dia mianjera amin'ny valin-kitsim-po sy ny fihetsiketsehana. Ny lehilahy manana testosterone avo lenta kokoa dia mahazatra kokoa ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny lehilahy zokiolona dia mila testosterone bebe kokoa ho an'ny libido sy ny erectile. Fa zava-dehibe ny manamarika fa ny dysfunction erectile dia matetika noho ny toe-javatra hafa na ny fanafody fa tsy ny ambany testosterone ambany.
Ny tahan'ny testostera ambany dia mifandray amin'ny hatsaran'ny fiainana mahantra. Ny sasany amin'ireo soritr'aretin'ny testosterone ambany dia ahitana ny fahaketrahana, ny reraka ary ny fahasosorana. Saingy ny fikarohana sasany dia mampisehoTrusted Sourcethat fa mety ho an'ny lehilahy manana hogogonadism ihany izany. Ny lehilahy izay nanaraka ny fihenan'ny tsimokaretina tato ho ato nandritra ny fotoana dia tsy nampitombo ny fahaketrahana.
Ny vokatry ny fitsaboana fitsaboana testosterone amin'ny fihetsehampo dia mety miovaova. Ireo olona manana tandroka hypogonadism dia nitatitra ny Trano fonenana izay nanatsara ny fahatsarany sy ny fahatsarany, ary nampihena ny herim-po sy ny fahasosorana. Ny fikarohana dia manondro fa io fitsaboana io dia mety ho fitsaboana mahomby amin'ny fanindrahindrana.
Mividiana vovony Cypionate Testosterone avy amin'ny Buyaas.com
Testosterone Cypionate: Tokony ho Fantatry ny Bodybuilder rehetra
Testosterone: Action, Deficiency, Substitution, natontan'i E. Njeschlag, HMBehre, pejy 259-275
Williams Textbook of Endocrinology E-book, nataon'i Shlomo Melmed, Kenneth P. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, pejy 759
Ny zava-mahadomelina, ny atleta, ary ny vokatra ara-batana, natontan'i John A. Thomas, pejy 96-97.